Profil amin'ny orinasa - Huai 'An Hongyu Medical Equipment Co., Ltd.
Hongyu Medical dia orinasa mitombo haingana miasa amin'ny famokarana sy ny fivarotana fitaovana fitsaboana. Hatramin'ny 2013, ny orinasa Hongyu Medical dia namolavola sy namokatra vokatra mihoatra ny 2000 ary namorona rojo famokarana matotra marobe, anisan'izany ny ophthalmology, fandidiana plastika, fandidiana Micro, Neurosurgery, sns, izay mety hahafahan'ny dokotera isan-karazany.
Mba hanenjehana ny kalitao voalohany, Hongyu Medical dia manamboatra fitaovana manta avo be amin'ny vatohara ho an'ny zavamaneno miaraka aminy dingan'ny famokarana mahazatra.Ny fitaovana mandeha ho azy mandroso dia manampy amin'ny fiantohana ny mahitsy sy ny fahaiza-manao famokarana tsy miova amin'ny fitaovana ara-pitsaboana rehetra.Besides, hampihena ny tahan'ny famokarana junk miaraka amin'ny fotoana mitovy, ny fisafoana dia misy hatrany amin'ny fizotran'ny famokarana tsirairay avy amin'ny fitaovana ka hatramin'ny farany vokatra.
Hongyu Medical ny fifehezana kalitaoNy departemanta dia napetraka mba hijery akaiky ny hatsaran'ny fitaovana tsirairay, ao anatin'izany ny endrika, ny habe, ny fametahana ary ny fonosana. Ny fisafoana rehetra dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny firenena sy fenitra anatiny, fitakiana manokana ihany koa ny mpanjifa. Indrindra ho an'ny filàn'ny mpanjifa manokana, ny mpiasan'ny fanaraha-maso kalitao dia manadino ny antsipirihany bebe kokoa amin'ny antsipirihany, mba hahafahana mameno ny filan'ny mpanjifa tanteraka. Izany no antony andefasan'ny mpanjifantsika azy. dia heverina ho manan-danja tokoa ho antsika, amin'ny alàlan'ny fanamboarana OEM / ODM matihanina any Chine.
Hatramin'izao, ny tsipika momba ny vokatra ara-pitsaboana Hongyu dia voarohirohy amin'ny zavamory aretin-kozatra, fitaovana fandidiana plastika, fitaovana fandidiana Micro, fitaovana Neurosurgery, anisan'izany ny Scissors Orthopedic, forceps, Tweezers, Fitaovana Elevator, Retractors, gunting Ophthalmic, forceps Ophthalmic, Mpitondra fanjaitra. fitaovana manokana hafa, ect.
Mba hanomezana ireo vokatra sy serivisy kalitao ho an'ny mpanjifa dia nametraka ny fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'ireo mpanamboatra indostria ara-pitsaboana malaza ao an-trano sy any ivelany isika. Ity fiaraha-miasa lava sy maharitra ity dia ilaina foana ho an'ny departemanta teknika ara-pitsaboana any Hongyu dia afaka mamolavola fitaovana ilaina kokoa amin'ny dokotera na andrim-panjakana mifandraika amin'izany. Mazava ho azy fa ny Hongyu Medical dia nitana ny fanavaozana fanavaozana hatrany mba hamoronana fitaovana vaovao ho eo an-tsena araka ny filan'ny tsena. .
Ny orinasa dia tsy mifantoka fotsiny amin'ny fanavaozana ara-teknolojika, miara-miasa amin'ny fikarohana ara-teknika maro ary mamolavola vokatra voa-marika noforonin'ireo dokotera, fa koa manohana am-panafody ireo fifanakalozan-kevitra akademika arak'asa ara-teknika, mba hahafahan'ny dokotera tanora mahazo fiofanana arak'asa sy fampiofanana teôlôgy, ary maro kokoa afaka mihatsara hatrany ny dokotera. Ity koa ny fahendren'ny orinasa.
Ny taranaka tanora ao Hongyu Medical dia hanohy hanome vokatra sy serivisy tsara kokoa ho an'ny dokotera mifanaraka amin'ny tenin'ny mpanorina.
Raha mila fanazavana momba ny fanavaozana ataontsika, dia avelao anay ny mailakao ary hifona izahay ao anatin'ny 24 ora.